Umbono weVilla-Sapodilla Beach kunye neChalk Sound
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguWilliam
Le HGTV Caribbean Life (Season 8 Episode 1) ibonise ikhaya ineembono zamanzi kumacala ama-3 kuquka nombono omangalisayo weChaki Sound. Le villa inamanqanaba amabini ibekwe kwindawo yabucala ye-Harbour Gates kwaye ilungile ukonwabela yonke imimangaliso yaseTurks kunye neCaicos. Inikeza ukufikelela ngokuthe ngqo kwe-kayak kwi-Chalk Sound yokugcinwa kwendalo kunye nokuhamba okufutshane ukuya kumanzi acwebileyo e-Sapodilla Bay. Iqula elisanda kufakwa longezwa emva kwe-HGTV ukwenza le ibe yeyona ndawo ifanelekileyo yokurenta kwiintsapho nabahlobo.
Umbono weVilla likhaya elinemigangatho emibini elinebalcony ephindwe kabini ebonelela ngeyona mbono ilungileyo yeChalk Sound eSapodilla Bay. Umgangatho osezantsi unamagumbi okulala ama-3, igumbi lokuhlambela, kunye negumbi lokuhlambela. Umgangatho ongaphezulu unekhitshi kunye nendawo yokuhlala kunye nebhafu epheleleyo. Inqanaba eliphezulu lokutyibilika iingcango zeglasi zivuleke ngokupheleleyo ukwenza umbono omangalisayo womoya ovulekileyo weChalk Sound ekwayindawo entle yokufumana i-massage yomoya ovulekileyo. Amagumbi amabini okulala asezantsi avula kwibalcony esezantsi apho unokonwabela incwadi entle ngelixa ubukele abantwana okanye abahlobo echibini apho banokonwabela khona emva kokubuya elunxwemeni okanye uhambo lwe-kayak kwi-Chalk Sound.
ISapodilla Bay kunye neTaylor Bay zimbini zezona lwandle zikhethekileyo eTurks naseCaicos. Indawo yethu yokuhlala ikwindawo yabucala yeHarbour Gates enendlela yokufikelela elunxwemeni yabucala eya eSapodilla Bay, kwaye imalunga ne-1/2 yeemayile ukusuka ekufikeni elwandle lwaseTaylor Bay. I-Providenciales sisiqithi esincinci, ngoko unokufikelela phantse kuzo zonke iindawo zokusingwa kwesi siqithi ngaphandle kwe-15-20 imizuzu yokuqhuba. Unokuhamba uye eLas Brisas kwisidlo sangokuhlwa kanye kwi-Chalk Sound.
Umphathi wethu wepropathi wasekhaya ulawula ama-80% amakhaya eSapodilla Bay naseTaylor Bay. Banabasebenzi kwindawo ngamaxesha onke, kwaye nabo bafowunelwa ngokukhawuleza ukuba ufuna nantoni na.
Kwakhona sizenza sifumaneke xa sifuna ukufowuna. Amava oNdwendwe yeyona nto iphambili kuthi.
Umphathi wethu wepropathi wasekhaya ulawula ama-80% amakhaya eSapodilla Bay naseTaylor Bay. Banabasebenzi kwindawo ngamaxesha onke, kwaye nabo bafowunelwa ngokukhawuleza ukuba ufun…